China EEC L2e Magetsi Kabhini Mota -X2 vagadziri uye vatengesi |Yunlong
EEC 3 Wheel Magetsi Kabhini Mota
EEC 4 Wheel Magetsi Kabhini Mota
EEC Electric Cargo Mota
EEC Electric Utility Mota
EEC L3e Electric mudhudhudhu
EEC L6e Magetsi Kabhini Mota -X5
EEC L6e Magetsi Cargo Mota ...
EEC L2e Magetsi Kabhini Mota -X2
Operation Philosophy: Yunlong E-mota, Electrify Your Eco Life!
Positioning: Yekufambisa daro pfupi uye kufamba kwemazuva ese.Inokupa iwe inochinjika yekufambisa sarudzo inogona kufamba-famba, inoita kuti hupenyu hwako hwezuva nezuva huve nyore.
Supply Ability:1000 zvikamu / mwedzi
Mitemo yekutumira:20-40 mazuva mushure mekugamuchira dhipoziti
Loading:4 mayunitsi e1*20'GP, gumi mayuniti e1*40HQ
1, Bhatiri:60V58AH Lead-Acid Battery, Hombe bhatiri kugona, 80km kutsungirira mileage, nyore kufamba.
2, Mota:1500W high-speed motor, rear-wheel drive, kudhirowa pamusimboti wekusiyanisa kumhanya kwemotokari, iyo yakanyanya kumhanya inogona kusvika 45km / h, simba rakasimba uye torque yakakura, yakavandudza zvakanyanya kukwira kwekuita.
3, Brake system:Mane Wheel Disc Mabhureki uye kiyi yekuchengetedza inovimbisa kuti mota haitsvedze.Hydraulic shock absorption inosefa makomba makomba .Iyo yakasimba kukwenya kunyura nyore kuchinjika kune akasiyana migwagwa zvikamu.
4, mwenje we LED:Full light control system uye malights e LED, akashongedzerwa masaini ekutendeuka, mabhureki mabhureki uye magirazi ekuona kumashure, akachengeteka zvakanyanya mukufamba kwehusiku, kupenya kwakakwirira, kure kurenje, kunaka kwakawanda, kuchengetedza simba uye kuwedzera simba rekuchengetedza.
5, Dashboard:High-definition dashboard, chiedza chakapfava uye yakasimba anti-kupindira kuita.Zviri nyore kuona ruzivo rwakadai sekumhanya uye simba, simbisa kufambira mberi kwakanaka kwekutyaira.
6, Matai:Kukora uye kuwedzera vacuum matayi anowedzera kukweshera uye kubata, kunowedzera kuchengeteka uye kugadzikana.
7, Kavha yepurasitiki:Iko mukati uye kunze kwemotokari yose yakagadzirwa nekunhuhwirira-isina uye yakakwirira-simba repamusoro-soro ABS uye pp engineering mapurasitiki, ayo ari kudzivirira kwezvakatipoteredza, akachengeteka uye akasimba.
8, Chigaro:Iyo ganda rakapfava uye rakasununguka, kona yebackrest inogadziriswa, uye ergonomic dhizaini inoita kuti chigaro chiwedzere kugadzikana.
9, Mukati:zvemukati zveumbozha, shongedzera nemultimedia,, hita uye yepakati kukiya, zadzisa zvaunoda zvakasiyana.
10, Mikova＆Windows:Motokari-giredhi yemagetsi magonhi nemahwindo uye panoramic sunroof yakagadzika uye iri nyore, inowedzera kuchengetedzeka uye chisimbiso chemotokari.
11, Mhepo yeMberi:3C Certified tempered uye laminated glass · Kuvandudza maonero ekuona uye kuchengetedza kuita.
12、Multimedia:Yakashongedzerwa neMP3 uye inodzosera mifananidzo, iri nyore-mushandisi uye iri nyore kushandisa.
13, Aluminium Wheels Hub:Kukurumidza kupisa kupisa, huremu huremu, simba rakawanda, hapana deformation, yakachengeteka zvakanyanya.
14, Frame & Chassis:GB Standard Steel, iyo yepasi pasi pekunhonga&Photostatting uye isingadzivirirwe kurapwa kuti ive nechokwadi chekutyaira kwakanaka nekumira uye kusimba.
60V/58Ah Lead-Acid Bhatiri
Motokari Charger 60V 5A
Mberi: 135/70-R12 Rear: 135/70-R12
MP3 + Rear yekuona kamera + bluetooth
Kusanganisira (Kumberi uye Kumashure)
Inopeta, ine zviratidzo zvemwenje
Zvakapfuura: EEC L6e Magetsi Kabhini Mota-Y4
Zvinotevera: EEC L6e Magetsi Cargo Mota Y2-C
EEC L1e Electric Bicycle
EEC L6e Magetsi Cargo Mota Y2-C
EEC L7e Magetsi Cargo Mota Y2-P